မိန်းမတွေဆိုတာ ( ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ) - Update News
မိန်းမတွေဆိုတာ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲလှဲလိုက်မိတယ်။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့လှပတဲ့မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်။
မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာနေပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ အခုကျတစ်ချက်ထဲ ရုတ်တစ်ရက်မှာပဲ သိတောင်မသိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ်။
ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေခဲ့တဲ့မိဘတွေကို စွန့်ခွာလာခဲ့ပြန်တယ်။ ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းပြုစုရင်း ကျွန်တော့ရဲ့မပြောပလောက်တဲ့ စကားလေးတွေနဲ့ သူပျော်နေပြန်တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့ကိုယ်ကျွန်တော် မေးခွန်းတစ်ချို့မေးနေမိတယ်။
ဒါလဲပဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မိမိရဲ့ဇနီးမိန်းမကို ရိုက်နှက်နေနိုင်ကြတာလဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက နှစ်ဘဝအတွက် ရည်စူးပြီးလာခဲ့သူကို တစ်ဘဝတောင် မကုန်သေးဘူး စိတ်ကုန်သွားကြတာလဲ။
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မိန်းမနဲ့သားသမီးကို အိမ်မှာ ထားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hotel တွေမှာ အစားအသောက်ကောင်းတွေ စားသောက်နေနိုင်ကြတာလဲ။ တစ်နေ့လုံး ယောကျာ်းလာမှ အတူတူစားမယ်ဆိုပြီး ထမင်းဝိုင်းလေးအသင့်နဲ့ ကလေးတွေကိုလက်ဆေးပေးပြီး ထိုင်စောင့်နေတဲ့ မိန်းမကို ဘာလို့မေ့နေရပြန်တာလဲ။
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့တစ်ချို့တွေက မိန်းမအတွက်တော့ အိမ်ကိုထောင်လိုလုပ်ထားလိုက်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်ကျတော့ အများသုံးအိမ်သာလို လာချင်တဲ့အချိန်လာ သွားချင်တဲ့အချိန်သွားဖြစ်နေကြတာလဲ။
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့တစ်ချို့တွေက မိမိဇနီးကို မျက်ရည်စက်နဲ့ညတွေကို ဖြတ်သန်းစေနေတာလဲ။ တစ်ချို့တစ်ချို့က မိန်းမမိသားစုကို အချိန်မပေးပဲ လမ်းပေါ်မှာပဲအချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးလိုက်နေကြတယ်။
မိသားစုမှာ ဖခင်ရဲ့နွေးထွေးမှု့ဆိုတာ သားသမီးတွေ သိခွင့်မရတော့တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ယောကျာ်းတွေ တာဝန်ခံပြီး တာဝန်မယူကြတော့တာလဲ။ ပြေးမယ်ဆိုလဲပြေး ဘယ်အထိပြေးကြမလဲ။
ဒီလိုတွေတွေးပြီး နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ့ညမှာ ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ် ကျွန်တော့မှာအေရှိတယ် ကျွန်တော့မှာမိန်းမလဲရှိတယ်။
ကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ဂုဏ်ယူလေးစားသင့်တယ်။ မိန်းမကိုကြင်နာရင်း မိဘကိုရိုသေရင်းပေါ့
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့ကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီး လောကထဲကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ယောက်က တစ်လောကလုံးကို စွန့်ခွာပြီး ကျွန်တော့ အနားကိုလာခဲ့တဲ့သူပါ။ အမေဆိုတာလဲ တစ်ချိန်က မိန်းမဖြစ်ခဲ့တယ်။
လက်ရှိဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့မိန်းမဆိုတာကလည်း တစ်ချိန်မှာ အမေဖြစ်အုံးမှာမို့ အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလဲတန်ဖိုး ထားကြပါ။ နားလည်နိုင်ကြပါစေ။ မိသားစုတိုင်း မိသားစုတိုင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ချစ်ခင်ခင် တစ်သက်တာ ပျော်ရွှင်စွာ
မူရင်း စာရေးသူအား credit ပေးပါသည်။
မိန္းမေတြဆိုတာ ညတစ္ညရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုပါ ကြၽန္ေတာ္ ကုတင္ေပၚမွာ မအိပ္ခ်င္ေသးပဲလွဲလိုက္မိတယ္။ အသင့္အိပ္ေပ်ာ္ေနရွာတဲ့ ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕ အားႏြဲ႕ႏြဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလးရဲ႕ ႏူးညံ့လွပတဲ့ မ်က္ႏွာေလးကို ကြၽန္ေတာ္ ေသခ်ာၾကည့္ေနရင္းကေန အေတြးတစ္ခ်ိဳ႕ဝင္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ့ဟာ ကြၽန္ေတာ္ေတြးေနမိတယ္။
မိန္းကေလးဆိုတာ ဘယ္လိုပါလိမ့္ ? ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ မဂၤလာမေဆာင္ခင္က မိဘအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈ႕ေအာက္မွာေနၿပီး ႀကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။ အခုက်တစ္ခ်က္ထဲ ႐ုတ္တစ္ရက္မွာပဲ သိေတာင္မသိထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ေဘးမွ ာအမိန႔္နာခံရင္းနဲ႔ အိပ္စက္ေနရျပန္တယ္။
ကြၽန္ေတာ့ေၾကာင့္ တစ္သက္လုံး အတူေနခဲ့တဲ့မိဘေတြကို စြန႔္ခြာလာခဲ့ျပန္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့ကို ပင္ပင္ပန္းပန္းျပဳစုရင္း ကြၽန္ေတာ့ရဲ႕မေျပာပေလာက္တဲ့ စကားေလးေတြနဲ႔ သူေပ်ာ္ေနျပန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့ကိုယ္ကြၽန္ေတာ္ ေမးခြန္းတစ္ခ်ိဳ႕ေမးေနမိတယ္။
ဒါလဲပဲဘယ္လိုျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက မိမိရဲ႕ဇနီးမိန္းမကို ႐ိုက္ႏွက္ေနႏိုင္ၾကတာလဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ႏွစ္ဘဝအတြက္ ရည္စူးၿပီးလာခဲ့သူကို တစ္ဘဝေတာင္ မကုန္ေသးဘူး စိတ္ကုန္သြားၾကတာလဲ။
ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက မိန္းမနဲ႔သားသမီးကို အိမ္မွာ ထားၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ Hotel ေတြမွာ အစားအေသာက္ေကာင္းေတြ စားေသာက္ေနႏိုင္ၾကတာလဲ။ တစ္ေန႔လုံး ေယာက်ာ္းလာမွ အတူတူစားမယ္ဆိုၿပီး ထမင္းဝိုင္းေလးအသင့္နဲ႔ ကေလးေတြကိုလက္ေဆးေပးၿပီး ထိုင္ေစာင့္ေနတဲ့ မိန္းမကို ဘာလို႔ေမ့ေနရျပန္တာလဲ။
ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက မိန္းမအတြက္ေတာ့ အိမ္ကိုေထာင္လိုလုပ္ထားလိုက္ၾကၿပီး ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ အမ်ားသုံးအိမ္သာလို လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္လာ သြားခ်င္တဲ့အခ်ိန္သြားျဖစ္ေနၾကတာလဲ။
ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက မိမိဇနီးကို မ်က္ရည္စက္နဲ႔ညေတြကို ျဖတ္သန္းေစေနတာလဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕က မိန္းမမိသားစုကို အခ်ိန္မေပးပဲ လမ္းေပၚမွာပဲအခ်ိန္ေတြကို ကုန္ဆုံးလိုက္ေနၾကတယ္။
မိသားစုမွာ ဖခင္ရဲ႕ေႏြးေထြးမႈ႕ဆိုတာ သားသမီးေတြ သိခြင့္မရေတာ့တာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ ေယာက်ာ္းေတြ တာဝန္ခံၿပီး တာဝန္မယူၾကေတာ့တာလဲ။ ေျပးမယ္ဆိုလဲေျပး ဘယ္အထိေျပးၾကမလဲ။
ဒီလိုေတြေတြးၿပီး ေနာက္ဆုံးအဲ့ဒီ့ညမွာ ကြၽန္ေတာ္ေတြးလိုက္တယ္ ကြၽန္ေတာ့မွာေအရွိတယ္ ကြၽန္ေတာ့မွာမိန္းမလဲရွိတယ္။
ကြၽန္ေတာ္သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလုံးကို ဂုဏ္ယူေလးစားသင့္တယ္။ မိန္းမကိုၾကင္နာရင္း မိဘကို႐ိုေသရင္းေပါ့
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ့ကိုအသက္နဲ႔ရင္းၿပီး ေလာကထဲကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က တစ္ေလာကလုံးကို စြန႔္ခြာၿပီး ကြၽန္ေတာ့ အနားကိုလာခဲ့တဲ့သူပါ။ အေမဆိုတာလဲ တစ္ခ်ိန္က မိန္းမျဖစ္ခဲ့တယ္။
လက္ရွိေဘးနားမွာ ရွိေနတဲ့မိန္းမဆိုတာကလည္း တစ္ခ်ိန္မွာ အေမျဖစ္အုံးမွာမို႔ အေမ့ကို တန္ဖိုးထားသလို မိန္းမကိုလဲတန္ဖိုး ထားၾကပါ။ နားလည္ႏိုင္ၾကပါေစ။ မိသားစုတိုင္း မိသားစုတိုင္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ တစ္သက္တာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ
မူရင္း စာေရးသူအား credit ေပးပါသည္။
Previous Article ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားလို့ တောထဲမှာဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာငိုကြွေးနေတဲ့ ချစ်သုဝေ
Next Article Facebook Messenger celebratesafull decade of being the only way your extended family can reach you
NUG အစိုးရ၏ အကူအညီတောင်းခံမှု‌ေကြာင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး) ကမင်းတပ်ကိုစကူပါပြီ
ချွေတာစုဆောင်းတက်ခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ကျပြီ ၁ နှစ်လောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အထိ ငွေစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲ
ထူးဆန်းမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ကဘာမြူဒါ (သို့မဟုတ်) ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗမာလူမျိုး ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း အကြောင်း (လူတိုင်းဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်)
မနက်ဆိုသစ်ပင် ညဖက်ဆိုဘီလူးဖြစ်တဲ့ သစ်ဘီလူးအပင်ကို စိုက်မိသူ တယောက်အကြောင်း
ငွေသားပေးသွင်းမှုများကို တုံကင်ယူရန်မလို အကန့်အသတ်မရှိ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပြီဟု CB ဘဏ်ကြေညာ
မင်းအောင်လှိုင် သေဂျင်းဇိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ကူးတို့ခတစ်မတ် Raffle Ticket လေလံတင်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
ဝါသနာရှင်များအတွက် အမိုက်စား DOODLES ဆွဲနည်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလာတဲ့ အဆိုတော်ကျားပေါက်